Global Voices teny Malagasy » Iran: Taombaovao Nowruz Tsy Misy Trondro Mena? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Marsa 2012 9:03 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Mediam-bahoaka, Tantara, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Fandravahana Latabatra Mandritra ny Taombaovao Persiana, hoy Greg Dunlap hita Flickr (CC-BY)
Fanamarihana: Trondro mena no ahafantarantsika ny trondro (gasy) mitovitovy aminy antsoina hoe “trondro volamena” raha adika avy amin'ny teny anglisy.
Manana ny toerany manokana eo amin'ny taombaovao Iraniana ankalazaina ny andro voalohany amin'ny lohataona (20 marsa) antsoina hoe, Nowruz , ny trondro mena. Saingy isan-taona dia manao fanentanana mandrisika ny mponina tsy hividy azy ireny ny bilaogera sy ny mpiaro ny [zon'ny] biby. Tazonina amin'ny toerana mampalahelo ny trondro ary an'arivoarivony amin'izy ireny no maty isan-taona.
Ny ivom-pombafomba fankalazana ny Nowruz dia ny latabatra “Haft Sīn” fametrahana ny famantarana ny hanimpitoloha (sakafo fito karazana) izay samy manomboka amin'ny litera ‘S’ (سین amin'ny teny Persa) avokoa ny anarany. Ravahana labozia, fitaratra, atody voaloko ary trondro mena ihany koa ny latabatra . Maro ny Iraniana tsy mitovy hevitra amin'ity raharaha ity.
Jadid Online nandrakitra lahatsarim-panadihadiana fohy (misy dika an-tsoratra amin'ny teny anglisy)  tamin'ny 2008 mampiseho ny fomba fividianana, fivarotana ary fiompiana an'orinasa ny trondron'ny Nowruz.
Trondro Mena Hankalazana Nowruz, hoy Parmida Rahimi hita Flickr (CC-BY)
Manoratra  [fa] ny bilaogera Iraniana:
Miangavy mba tsy hividy trondro mena. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izao ny mpiaro ny zon'ny biby no efa namoaka fanentanana an-tserasera manakivy ny olona tsy hividy ity biby mahafatifaty ity. Mihamahomby isan-taona izany fanentanana ataon-dry zareo izany. Rehefa hiantsena amin'ny fikarakarana ny taombaovao moa ny olona dia mivoaka eny an-tsena koa ny trondro mena. Nanomboka nanao fahirano ity varotra mamono ity ny mpanentana. Tsy avy amin'ny fomban-drazana Iraniana ny trondro mena fa avy amin'ny fomban-drazana Shinoa. Trondro mena 5.000.000 isan-taona no ripaka mandritra ny fotoanan'ny Nowruz.
Trondro amidy tao Teheran hoy Mahtab hita Flickr (CC-BY-NC-ND)
Tsy mitovy hevitra amin'izany ny ao amin'ny Greenblog. Manoratra  ny bilaogera [fa]:
Tsy tokony hanao fahirano ny trondro mena isika. Tsy tokony hanokatra tontolo mankahala ny biby isika fa tokony hampianatra sy hanabe ny olona amin'ny fomba ikarakarana ny trondro mena, miainga any amin'ny mpanao fitaterana ka hatrany amin'ny mpividy isika… tsy tokony hanao fampielezan-kevitra manohitra ny tondro mena, fa tokony hanatsara ny fanaraha-maso ireo mpizara trondro mena… Rehefa tratran'ny fanentanana manaratsy ny Iraniana sasany dia nanolo ny trondro mena ho sokatra ry zareo tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Nanampy  ny bilaogera fa raha niteny ny sasany hoe avy amin'ny fomban-drazana shinoa ny trondro mena, nohamarininy tao amin'ny aterineto tamin'ny alalan'ny google kosa indray fa naka io fomba io tany Iran ny Shinoa!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/17/30515/
 lahatsarim-panadihadiana fohy (misy dika an-tsoratra amin'ny teny anglisy): http://www.jadidonline.com/story/19032008/frnk/tiny_nawruz_messengers_eng